PU Foam isicoci
Amacandelo amabini ePU Foam
Ulapha : Ikhaya>Ngathi>inkampani yabucala
I-sunrise Chemical Industrial Co, Ltd (iShanghai uYoshengwini weTyathanga leMveliso Co, Ltd) yinkampani ephezulu ye-ISO9001-2015 ekwenza uphando nasekuphuhliseni ukusetyenziswa kwetekhnoloji yokunamathela kunye nokutywina. Asisiye kuphela umphambili wokwenza izixhobo zokubambelela, kodwa sikwangomnye wabenzi abakhulu be-Foum e-PU e-China. Umbono wenkampani kukwakha uphawu lwehlabathi kunye nokuba sisiseko sokudibanisa kwemveliso ekumgangatho wehlabathi.
Imveliso yechemical sunrise Chemical ineziseko ezimbini zangoku zemveliso yokuncamathela ezifumaneka kwiphondo laseShanghai nelaseShandong, China, ezigubungela ummandla oziimitha ezingama-70,000, XNUMX kwaye zixhotyiswe ngemigca yokuvelisa ezenzekelayo evela kwiYurophu.
Imveliso ye-Chemical sunrise Chemical ineendlela zokulawulwa kwemveliso ezigqibeleleyo kunye nenkqubo yokuqinisekisa umgangatho. Sifumene isatifikethi somgangatho we-ISO 9001-2015. Njengenkokheli yeentengiso kwi-adhesives kunye nee-foams ze-PU, siye saqinisekiswa ukuba sikwazi ukubonelela abathengi baso ngemveliso ekumgangatho uphakamileyo kunye nenkonzo.
Imveliso yelizwe ye "sununise Chemical" ye "SUNRISE" iphumelele imbali ephezulu kunye nokwazisa ngemveliso kushishino emva kweminyaka ephantse ibe ngama-20 yophuhliso. Iimveliso zethu zigubungele iindawo ezahlukeneyo zesicelo, njengokwakha, ukuhonjiswa kwendlu, izinto ze-elektroniki, ukuqhuba iimoto, ukuthutha uloliwe, njl njl. Nangaphezulu, igwebu le-SUNRISE PU liqhubekeke phambili kwimarike yokwakha ephezulu.
Iimveliso zeSUNRISE zithengiswa kwihlabathi liphela ukuya kumazwe angaphezu kwama-50, njengeJamani, United States, Russia, Japan, South Korea, India ne-Dubai. Isetyenziswe ngokubanzi kwiiprojekthi ezininzi ezinkulu, njengeZiko leMidlalo leSizwe leBeijing, iziko lenkcubeko ye-ExPO yeHlabathi, iJinmao tower, iTomson Riviera, Ibala laseVillage, i-Star River, isikhululo seenqwelomoya samazwe aphesheya ePudong, iZiko lezeMali lamanye amazwe eBeijing, eCitibank nakwisakhiwo saseFransi. kwaye ndifumene izimvo ezilungileyo ezivela kubathengi.
Sijonge phambili ekwenzeni ikamva elingcono kumzi-mveliso wamachiza kunye nani, bahlobo bam abathandekayo.
Idilesi: 28F, No.1958, Zhongshan North Road, Shanghai, P, R.China
Inombolo yomnxeba:+ 86 021-62050668
Imveliso yelungelo lokushicilela © 2020. Onke amalungelo agciniwe.